Norregård Surfers Dorm - Ukuphila okuyingqayizivele ogwini - I-Airbnb
Norregård Surfers Dorm - Ukuphila okuyingqayizivele ogwini
Falkenberg V, Hallands län, i-Sweden
Indawo yonke ibungazwe ngu-Katarina
U-Katarina Ungumbungazi ovelele
Kutholakala cishe emzuzwini ongu-1 wokuhamba ngezinyawo ukusuka ebhishi e-Olofsbo!
Ukuthinta okuyingqayizivele kwendlu kusukela maphakathi nekhulu le-19 ngesitayela sesimanje. Eduze nebhishi, igalofu nezinto eziningana ongazenza ngaphandle kwendawo ngemizuzu embalwa. Yiqiniso futhi ezinye izindawo zokudlela nezitolo zokudla eziseduze.
Siyakwamukela ekhaya ukuze ukhumbule futhi ubuyele e-!
Silwela ukuhlanganisa umbono oyingqayizivele wendlu kusukela maphakathi nekhulu le-19 ngesitayela sesimanje nazo zonke izinsiza ongazidinga ukuze uhlale kahle.
I-40 sqm "Surfers Dorm" ihlanganisa indawo yokudlela kanye negumbi lokuhlala elihlanganiswe cishe ne-15 sqm kanye nekamelo lokulala elinemibhede engu-3 eyodwa cishe ne-18 sqm. Kuhlanganisa futhi okujwayelekile okuhlome ngokuphelele mayelana nekhishi elihlanganyelwe elingu-10 sqm kanye negumbi lokugezela elihlanganyelwayo Ifulethi lifakwe kahle ngama-beanbag angu-3 kanye netafula lokudlela labantu abangu-6. Une-TV engama-intshi angu-32 exhunywe ku-Apple TV ukuze ukwazi ukubuka iziteshi zakho ozithandayo nokubhaliselwe kumamuvi nabahlinzeki bochungechunge (ungakhohlwa igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi).
Igumbi lokugezela elikhulu elingu-10 sqm liyakhanya futhi lineshawa elihle, usinki nekhabethe kanye nezindawo zokuwasha.
Wonke amakamelo anombono wegceke kanye nezingxenye zengadi. Inemibhede emi-3 yabantu abangabodwana kanye nekhabethe.
Kusukela ku-"Surfers Dorm" uyakwazi ukufinyelela igceke lethu eliyimfihlo, okwabelwana ngalo nezinye izihambeli zethu, lapho ujabulela khona isikhathi sokuphumula ekuseni, ntambama noma kusihlwa. Kungani ungalungiseleli ukudla kwakusihlwa ku-grill oyithola epulazini? Ehlobo ungakwazi ukujabulela ikhofi ekuseni ematafuleni ethu ngaphandle. Ebusika unesibhakabhaka sonke esigcwele izinkanyezi ongasibuka uma isimo sezulu sivuma
Siyakwamukela ku-Norregård 1846 ukuze uhlale sethemba ukuthi uzokhumbula ngenjabulo nokulangazelela ukubuya lapho uya khona. Sithemba ukuthi uyayithanda indlu njengoba senza!
Ungangabazi ukubuza uma unemibuzo mayelana namagumbi ethu noma indawo esizungezile
Umndeni wonke uthanda u-Olofsbo. Ogwini olude olunesihlabathi esinezindunduma ezizungezile umuntu angathanda ukuchitha amasonto amahle ehlobo. Yidla u-ayisikhilimu ngobuningi, izinkalankala zezinhlanzi, dlala igalofu elincane noma uhlale esihlalweni sompheme. Hamba ngezinyawo endaweni, kwi-windsurf, i-kite surf, dlala igalofu, gwedla ngaphandle noma ujabulele ezinye zezindawo zokudlela namabha e-Olofsbo. Kungani ungavakashele indawo yokudlela yezinhlanzi edumile e-Glommen okufanele uyivakashele. Uma uthanda ukuzijabulisa kwakusihlwa okwengeziwe e-Falkenberg noma ehlobo i-Skrea Strand - konke kuzo zonke izinketho eziningi, futhi sikhona ukuze sikunikeze ulwazi olwengeziwe uma nje ubuza. Iya kusizindalwazi sethu ukuze uthole okwengeziwe ngezinye zayo zonke izinto ezitholakalayo
A Swedish citizen WHO Travel the World in work and during vacation with the family. Good service and high standard is essentiell in my choices in places i chose to stay in. At the same time i am easy going and like to chill when opportunistisk are coming up.
A Swedish citizen WHO Travel the World in work and during vacation with the family. Good service and high standard is essentiell in my choices in places i chose to stay in. At the…
UKatarina Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Falkenberg V namaphethelo